July 2017 – မဟာခေတ်သစ်မီဒီယာ
သန်းကြွယ်သူဌေးဘဝမှ မွဲပြာကျပြီး လူတကာရဲ့ နာကျည်း-အမုန်းခံဘဝကို ရောက်သွားရသူ
31/07/2017 31/07/2017 Yawthama0Comments
တောင်ကိုးရီးယား၏ သန်းကြွယ်သူဌေးမိသားစုသည် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ဆင်းရဲသော ဘဝ သို့ ရောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်း ****************** ၁၉၈၇ခုနှစ် ဝူးဆန်း (Woosung) ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ၄ ထပ်တိုက်တခုကို တာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်နေခဲ့သည်။ အဆောက်အဦး ၃ ပုံ
သင့်ကလေးတွေ ဒီလိုပြုလုပ်နေလျှင် ဘယ်တော့မှ မတားမြစ်ပါနဲ့
31/07/2017 Yawthama0Comments
သင့်ကလေးတွေ ဒီလိုပြုလုပ်နေလျှင် ဘယ်တော့မှ မတားမြစ်သင့် ကန့်သတ်ချက်များက ကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုတည်ငြိမ်ပြီး လုံခြုံတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်များက ထင်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း တချို့ကန့်သတ်ချက်များက သူတို့ ဖွံဖြိုးတိုးတတ်မှုကို နှေးကွေးပြီး မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားရစေခြင်းကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်
အ.ထ.က မြင်သာကျောင်းက ဆဋ္ဌမတန်း(B)ကအတန်းပိုင်ဆရာမရဲ့ ရိုက်ချက်
အ.ထ.က မြင်သာကျောင်းကဆဌမတန်း(B)က အတန်းပိုင်ဆရာမကကျောင်းသားတွေကိုဆရာမထိုင်တဲ့ခုံပျောက်လို့ဆုံးမတာပါ အကြောင်းကတော့ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်မြင်သာရွာမှာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်လို့ကျောင်းပိတ်ရတော့စာရေးခုံတွေ ဆရာမထိုင်တဲ့ခုံတွေကိုပျက်စီးမှာစိုးတော့သိမ်းထားကြပါတယ် ရေလျော့ပြီးကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ကျောင်းသား တွေကိုယ့်အတန်းသူ့အတန်းခုံတွေပြန်ယူတော့မှားယူသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဲဒါကြောင့်မှားယူရမလားဆိုပြီးတန်းလုံးကိုရိုက်ပြီးဆုံးမပါတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ခြေထောက်ကခုလိုဖြစ်သွားပါတယ် ကျွန်တေ်ာအရင်ကသတိမထားမိပါဘူး သွေးကနေ့တိုင်းထွက်နေတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့တင်ရတာပါ ဒီလိုဖြစ်လိုို့မြင်တဲ့သူတွေရပ်ကွက်ကလူတွေအဲဒီဆရာမကိုပြောတော့လည်းဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ဆရာမကပြောပါတယ် အဲဒီကျောင်းသားအနာကရင်းတော့နေတိုင်းဆေးထည့်ပေးနေရတယ်ဗျာ မသိလို့မေးပါရစေပညာရေး(ဥပဒေ)ခုလိုသွေးထွက်ဒဏ်ယိုဖြစ်အောင်ဆုံးမတာခွင့်ပြုထားပါသလားခင်ဗျားမသိလို့ပါပြောပေးပါဦး
စကားများရန်ဖြစ်ပြီး လမ်းပိတ်ထားမှုကြောင့် အသုဘချရန်​ အခက်​အခဲ ကြုံတွေ့
စကားများရန်ဖြစ်ပြီး လမ်းပိတ်ထားမှုကြောင့် အသုဘချရန်​ အခက်​အခဲ ကြုံတွေ့ 31 July 2017 မန္တလးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် တောင်သာမြို့နနယ် ဆင်ဖြူကျေးရွာမှာ ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ညက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဦးမောင်မြင့်ကြည် ရုပ်အလောင်းအား သုသာန်မှာ
အဖြေရှာမရတဲ့ကမ္ဘာ့ပဟေဠိအဆန်ဆုံးလူမျိုး (သို့ ) ကမ္ဘာကြီးထဲကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့မာယာလူမျိုးများ
31/07/2017 04/05/2018 Yawthama0Comments
အဖြေရှာမရတဲ့ကမ္ဘာ့ပဟေဋ္ဌိအဆန်ဆုံးလူမျိုး (သို့ ) ကမ္ဘာကြီးထဲကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့မာယာလူမျိုးများ . ကမ္ဘာဦးအစထဲကလူမျိူးပေါင်းများစွာရှိခဲ့သ လို ထူးဆန်းတဲ့လူမျိူးစုများစွာလဲရှိခဲ့ပါတယ်။ လူတွေအများဆုံးသိကြစိတ်ဝင်စားကြတာဆိုရင်တော့ အီဂျစ်ပေါ့ဗျာ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ လူစိတ်ဝင် အစားဆုံး ရေဗန်းအစားဆုံးပေါ့။ အီဂျစ်နဲ့တဆက့် ထဲ နာမာ ဖာရို ကနာနီတီ အဲလီဖန်တီ
မြစ်ကြီးနားက ထူးခြားတဲ့ဆရာဝန် နှစ်ယောက်
credit ကျနော်တို့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ထူးခြားတဲ့ဆရာဝန် နှစ်ယောက်ရှိတယ် တစ်ယောက်က ရှမ်းစုတောင်မှာဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ဒေါက်တာကံမြင့် သူ့ဆေးခန်းမှာ သွားပြရင် ခများဟာခများ ခေါင်းပဲကိုက်ကိုက် နှာပဲစေးစေး ဘိုက်ပဲနာနာ ကြီးကြီးမားမားရောဂါမဟုတ်ရင် ကြိုက်တဲ့ရောဂါဖြစ် သူ့သတ်ချက်ကြေးက ၇၀၀၀ ပဲ ဆေးအကောင်းစားတွေ သုံးတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငတ်လို့သေတဲ့မသာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ စကား ခုတော့ မှားသွားပြီ
30/07/2017 Yawthama0Comments
ငယ်ငယ်တုန်းကရော ခုထိရော ပြောနေကြတဲ့ ပြောဖူးကြတဲ့ စကားတခွန်း ပြန်ကြားယောင်မိတယ် … မြန်မာပြည်မှာ ငတ်လို့ သေတဲ့ မသာ မရှိပါဘူးကွာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး သယံဇာတပေါင်းစုံ ပေါကြွယ်ဝလှတဲ့ နိုင်ငံ အလှူ အတန်းနဲ့ ပတ်သတ်လာရင်
မကွေးအချုပ် ခန်းထဲမှာ ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားသူ ကိုသန်းထိုက်အောင်အကြောင်း အဖြစ်မှန်ကို သိချင်နေကြပါတယ်
(သန်းထိုက်အောင်ဟာ ကျမ္မာရေးကောင်းတဲ့သူ ဘာရောဂါမှမရှိသူ အောင်လံမှာ ပရဟိတ အလုပ်များကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်သူ စိတ်သဘောကောင်းသူ ငွေကြေး ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းမဟုတ် အေးချမ်းစွာနေသူ သူလိုလူက. ဆိုင်ကယ် ရောင်းမှားဝယ်မှာကိစ္စနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေစရာအကြောင်းမရှိဘူး တနင်္လာနေ့ဆေးစစ်ချက်ရမယ်ပြောတယ် စောင့်ုကြည့်နေတယ် အမှန်တရာပေါ်ထွက်လာသည်အထိ ၀န်းရံမယ် ၂၈.၇
အသက် ၇ဝ အရွယ် အဘွားအို၏ နေအိမ်ထမင်းပေါင်းအိုးအတွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
အသက် ၇ဝ အရွယ် အဘွားအို၏ နေအိမ်ထမင်းပေါင်းအိုးအတွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ ================== ================== မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်နေ အသက် ၇ဝ အရွယ်အဘွားအိုတစ်ဦးနေအိမ်ရှိ ထမင်းပေါင်းအိုးအတွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဇူလိုင်လ
မမှီဝဲအပ်သောမိန်းမငါးယောက် ……………………………………… (1)အလွန်အဆင်းလှသောမိန်းမ (2)ချစ်ခင်နှစ်သက်သူများသောမိန်းမ (3)ကချေသည်သီချင်းသည်(အနုပဥာရှင်) (4)သူတစ်ပါး၏မယား (5)ဥစ္စာကိုလို၍မိမိအားချဉ်းကပ်သူမိန်းမ …………………………… ဤငါးယောက်သောမိန်းမတို့ကိုဝေးစွာရှောင်ကျဉ်ရာ၏။ ************************* ရှေးလွန်လေပြီးသောကာလ ကောသလမင်းသည်ဗာရာဏသီကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးသည့်နောက် ဗရာဏသီမင်း၏မိဘုရားကိုပါသိမ်းပိုက်လျှက်မိဘုရားကြီးအဖြစ်တင်မြှောက်ကာတိုင်းပြည်သို့ပြန်လာခဲ့လေသည်။ ထိုမိဘုရားကြီး၌ဗရာဏသီမင်းနှင့်ရသောကိုယ်ဝန်ပါလာခဲ့၏ ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုသို့ရောက်သော်သားယောက်ျားလေးဖွားမြင်လေသည် ကောသလမင်းကြီးလည်းသားယောက်ျားလေးမရှိသဖြင့်သားအရင်းကဲ့သို့ချစ်သဖြင့် အရွယ်ရောက်သောအခါဖခင်၏ဥစ္စာဖြစ်သောဗာရာဏသီပြည်ကိုမင်းပြုစေ၏။ ထိုအခါမိဘုရားကြီးသည်ကောသလမင်းကြီးကိုခွင့်ပန်ကြားပြီးလျှင်သားတော်ထံအလည်အပတ်သွားလေသည် ခရီးအကြား၌ရှိသောနိဂုံးရွာတွင်အခြံအရံနှင့်ခရီးတစ်ထောက်နားခိုလေသည် ထိုနိဂုံးရွာတွင်ပဉ္စလအမည်ရသောပုဏ္ဏားလုလင်သည်ကားအလွန်ပင်အဆင်းလှပလေ၏